Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny tsy fetezan'ny vaksiny dia mety hanakana ny fanarenana vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Nanamafy i Edmund Bartlett fa ny fampitomboana ny fidirana amin'ny vaksinin'ny COVID-19 no lakilen'ny fizahan-tany miompana amin'ny laoniny sy ny fitsanganan'ny toekarena manerantany. Izany, rehefa nitaraina ny amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny tsy fitoviana amin'ny vaksininy izy, izay nolazainy fa mety hanakantsakana ny fanarenana eran-tany.
Ny vaksiny manerantany dia tsy vitan'ny filàna ara-pitondrantena fotsiny fa koa manome fahatsapana ara-toekarena maharitra.
Mbola mitohy ny tsy fitovizan'ny vaksinina, na dia misy vaksiny mihoatra ny 6 miliara aza aparitaka eran'izao tontolo izao, ny ankamaroan'izy ireo dia any amin'ny firenena be vola.
Ireo firenena mahantra dia manana vaksiny latsaky ny 1% amin'ny mponina ao aminy.
“Tsy hisy ny fanarenana amin'ny laoniny raha tsy mijanona ny krizy ara-pahasalamana. Fahazoana vaksiny no lakilen'ny roa tonta. Mampalahelo fa amin'ity dingana ity amin'ny areti-mifindra, ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny dia mitohy, na dia mihoatra ny 6 miliara aza ny vaksinina voaparitaka, ny ankamaroan'izy ireo dia any amin'ny firenena manana fidiram-bola be nefa ny firenena mahantra dia ambany noho ny 1% ny mponina vita vaksiny. Manaiky izahay fa ny fanaovana vaksiny manerantany dia tsy vitan'ny filàna ara-pitondrantena fotsiny fa koa mampiseho fahatsapana ara-toekarena maharitra», Hoy ny minisitra.
Nanao izany ny minisitra omaly (6 Oktobra), nandritra ny fampisehoana virtoaly ny Kongresin'ny minisitra amerikana sy ny manampahefana ambony momba ny fizahantany avo lenta. Nampivondrona ireo tompon'andraikitra ambony mpizahatany, ary koa ny solontena avy amin'ny sehatry ny varotra, ny akademia ary ny fiarahamonim-pirenena, mba handinika ny paikady fanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny COVID-19 amin'ny fizahan-tany, ary koa ny fizahantany aorian'ny COVID-19.
Nandritra ny lahateniny dia nanentana ny mpitondra firenena mandroso izy mba hizara vaksininy amin'ireo firenena ambany fidiram-bola, ary manamarika fa, ny fandrindrana sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena no lakilen'ny fiantohana ny programa fanaovana vaksiny manerantany.
“Raha jerena ny toetran'ny areti-mifindra, sy ny COVID-19, indrindra, tsy misy fizahan-tany maharitra maharitra na maharitra izay avelan'ny firenena ambany fidiram-bola. Ity no lohahevitry ny Agenda 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra - fandrao hadinontsika. Amin'izay lafiny izay, mandray sy mankasitraka ny fanomezana vaksinin'ireo mpiara-miasa novolavolainay izahay ary hamafisinay fa fanomezana tokony ho tonga amin'ny fotoana ilana azy sy mahomby ireo, miaraka amin'ny fiheverana ireo datin'ny vaksinina lany daty, ”hoy izy.
Nandritra ny fotoam-pivoriana dia nanana fotoana nifanakalozana hevitra ny minisitra sy ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany mifandraika amin'ny fiantraikan'ny valanaretina COVID-19 amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary mamantatra ireo faritra mivaingana ho an'ny fiaraha-miasa eo amin'ireo fanjakana mpikambana mba hampiroboroboana ny fanarenana azy ireo. fanarenana aorian'ny areti-mandringana.
Ny minisitra Bartlett amin'izao fotoana izao no filohan'ny Vondrona miasa OAS avo lenta izay mamolavola drafitra hetsika iray ho fanarenana ny indostrian'ny sambo sy fiaramanidina.
Ny vondrona miasa dia iray amin'ireo efatra, izay nambara nandritra ny fivoriana manokana faharoa an'ny Komity iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany OAS (CITUR) natao tamin'ny 14 aogositra 2020, mba hanamorana ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.